Ihe ijuanya 5 ihu igwe na-adịghị ahụkebe | Netwọk Mgbasa Ozi
5 obere ihu igwe phenomena
Igwe ojii na-esi na ụgbọelu apụta.
Meteorology bu ihe sayensị na-adọrọ mmasị, nke na-eju gị anya mgbe niile. Anyị bikwa na mbara ala dị ndụ nke ukwuu, nke mere na enwere mgbe ụfọdụ ihe omuma di iche iche, ma ọ bụ nke mara mma.
̀ chọrọ ịma ihe ụfọdụ n’ime ha bụ? Nke a bụ ndepụta nke 5 kachasị ịtụnanya na ihe ijuanya.
1 Igwe Pyrocumulus
2 Green undergbè Eluigwe
3 Noctilucent n'ígwé ojii
4 Belt nke Venus
5 Oke mmiri ozuzo
Mara mma, nri? Igwe ojii a, nke a na-akpọkwa igwe ojii ọkụ, dị ka ero ma na-etolite mgbe elu ikuku dị ọkụ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa. Ka okpomọkụ na-arị elu, a na-emegharị mmegharị ntụgharị nke na-eme ka ikuku ikuku na-ebili ruo mgbe ọ rutere n'ọnọdụ nkwụsi ike. Ya mere, ha na-etolite naanị mgbe enwere oke iwe ọkụ dị egwu, dị ka mgbawa ugwu mgbawa, ọkụ oke ọhịa, na ọbụna mgbawa nuklia.
Green undergbè Eluigwe
A makwaara dị ka ihe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ bụ ihe ngosi anya nke na-eme mgbe anyanwụ dara, ma ọ bụ tupu ọwụwa. Ọ na - adị ma mgbe ìhè gabigara ikuku; ikuku dị ala dị nkenke karịa nke ọkwa elu, ya mere ụzarị anyanwụ na-agbaso ụzọ gbagọrọ agbagọ karịa ma ọ bụ obere. Green ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ ìhè ekwe karịa acha ọbara ọbara ma ọ bụ oroma ìhè, ya mere, ọ nwere ike hụrụ na gba ọtọ anya.
Noctilucent n'ígwé ojii
Ndị a bụ igwe ojii kachasị elu dị na mbara igwe, nke dị na mesosphere, na elu n'etiti 75 na 85km. A na-akpọkwa ha dị ka igwe ojii nke polar mesospheric. Nke a onu ọ na-apụta nanị mgbe ìhè anyanwụ na-enye ha ìhè site n’okpuru mbara igwe, ebe akụkụ ndị dị ala “zoro ezo,” na ndò.
Belt nke Venus
Have hụtụla akwa mkpuchi pink na mbara igwe mgbe ị biliri n'ụtụtụ? A na-akpọ oyi akwa a Belt nke Venus, nke gbatịrị n'etiti 10 na 20 ogo n'elu mmiri. Thecha pink nke arch bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ìhè gosipụtara n'akụkụ ebe o si bịa, ya bụ, anyanwụ.
Eddies ọkụ ma ọ bụ oke ifufe ọkụ bụ ihe a na-ahụkarị site na ọkụ ọkụ. Ha nwere ike itule site na 10 ruo 50 n'ogologo, na mita ole na ole n'obosara; ọ bụ ezie na ọ bụrụ na e nye ọnọdụ ndị kwesịrị ekwesị ha nwere ike ịtụ ihe karịrị 1km n'ịdị elu, ma nwee ifufe na-efe karịa 160km / h. na Akụkọ a ị pụrụ ịhụ ọmụmụ nke otu.
Kedu ihe ị chere banyere ụdị egwu ihu igwe ndị a? You maara ndị ọzọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » 5 obere ihu igwe phenomena
Gịnị mere o ji ete mmiri apịtị?
Kedu ihe bụ okpomọkụ